Ungalifumana njani iqonga lokurhweba elifanelekileyo kubaqalayo ngoMeyi 2022- Funda ukuThengisa
Elona qonga liphakamileyo lokuthengisa labaQalayo ngo-2022
I-eToro-Elona Qonga liNtengiso laBasaqalayo
Ixhasa iindlela zokuhlawula ezininzi kubandakanya i-e-wallets
Kuphela zii-Cryptos zokwenyani ezikhoyo eMelika.
Vula iAkhawunti yasimahla
Fumana elona qonga lilungileyo lokurhweba, nokuba ujonge ukurhweba esitokisini kunye nezabelo, i-forex, Iimpahla, amazinga enzala, okanye imali ye-crypto - kuya kufuneka ufumane iqonga lokurhweba kwi-intanethi elihlangabezana neemfuno zakho. Ngamakhulu amaqonga okurhweba ngoku asebenzayo kwindawo yentengiso yase-UK, ukwazi ukuba yeyiphi i-broker onokuyikhetha kunokuba ngumngeni.
Ngelixa amanye amaqonga ekuvumela ukuba uthenge kwaye uthengise amawaka eeasethi, ezinye zijolise kwimirhumo ekhokelela kumzi-mveliso. Nokuba yeyiphi na indlela, kuya kufuneka uqiniseke ukuba iqonga ekuthethwa ngalo lihlangabezana neemfuno zakho zorhwebo.
Kananjalo, senze isikhokelo sokugqibela Ungalifumana njani elona Qonga leNtengiso liQalayo e-UK. Ngaphakathi kuyo, siza kukubonisa izinto ezininzi ekufuneka ujonge kuzo xa ukhetha iqonga elitsha, elilandelwa ngabona bakhethi be-5 baphambili be-2022
Qaphela: Qinisekisa ukuba unolwazi oluqinisekileyo lomngcipheko ophambi kokuba uqale urhwebe ngemali yokwenyani. Uninzi lwabarhwebi abakwi-Intanethi baya kuphulukana nemali, ke qiniseka ukuba uhlamba kwizakhono zakho ngaphambi kokuba uqhubeke.
Zithini i-Pros kunye ne-Cons of Platforms zokuthengisa?
Amakhulu amaqonga orhwebo onokukhetha kuwo
Abathengisi base-UK kufuneka balawulwe yi FCA
Imirhumo yokurhweba iya isiba nokhuphiswano ngakumbi nangakumbi
Thenga uthengise iiasethi kwidesktop yakho okanye kwisixhobo esiphathwayo
Ixhasa iindlela zokuhlawula zemihla ngemihla ezinje nge-debit / ikhadi lekhredithi
Ungaphulukana nemali ukuba awufaki ilahleko ezinengqondo
Abasebenzisi abatsha abangama-299 namhlanje
I-EUR / IRUBHI
I-USD / RUB
Yintoni iPlatform yokuthengisa?
Kwindlela yayo esisiseko, iqonga lokurhweba ngumrhwebi okwi-intanethi ekuvumela ukuba uthenge kwaye uthengise uluhlu lweeklasi zeeasethi. Kwixesha elingekude kangako, kuya kufuneka ubize umthengisi-zitokhwe ukuze enze utyalo-mali. Ayisiyiyo le nkqubo inzima kuphela, kodwa iifizi zihlala zihlala phezulu. Ngale nto ithethwayo, ubudala bedijithali ngoku buvumela urhwebo ukusuka kwinduduzo yekhaya lakho.
Umxholo ogqithisileyo weqonga lokurhweba ulula. Uvula iakhawunti, uqinisekise isazisi sakho, ufake imali, emva koko urhwebe. Uninzi lwamaqonga e-UK aya kubonelela ngemfumba yeeklasi zeasethi, ezibandakanya izabelo zestokhwe, i-forex, kunye namawaka ee-CFD. Uya kuba nolawulo olupheleleyo lwezorhwebo ozenzayo, ke akukho ukuthembela kumcebisi weqela lesithathu ukukukhokela.
Kananjalo, kubalulekile ukuba ube nokuqonda okuqinisekileyo malunga nendlela urhwebo lwe-Intanethi olusebenza ngayo. Nangona kunjalo, amaqonga orhwebo akwi-Intanethi enza imali yawo ngokukuhlawulisa imali ngalo lonke ixesha ubeka iodolo. Oku kuhlala kuza ngohlobo lwekhomishini, ebalwa njengepesenti xa kuthelekiswa nobungakanani beodolo yakho. Ukongeza, amaqonga orhwebo akwi-Intanethi enza nemali kwi sasaza.
Lo ngumahluko phakathi 'kokuthenga' kunye 'nokuthengisa' ixabiso. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba onke amaqonga orhwebo asebenza e-UK kufuneka alawulwe liGunya lokuZiphatha kwezeMali (i-FCA). Ukuba ayisiyiyo, ke iqonga lokurhweba lisebenza ngokungekho mthethweni.
Ndingathengisa ngantoni kwiQonga lokuRhweba kwi-Intanethi?
Ke ngoku ekubeni uyazi ukuba liqonga lokurhweba elingakanani, ngoku kufuneka ucinge ngeentlobo zezixhobo zemali onqwenela ukutyala imali kuzo. Phambi kokuba senze njalo, kubalulekile ukuba uqaphele ukuba amaqonga orhwebo alungiselelwe abo banqwenela ukuzibandakanya iqhinga lotyalo-mali lwexesha elifutshane. Ngamanye amagama, ukuba ujonge ukutyala imali kwiasethi ixesha elide, uya kuba ulunge kakhulu xa usebenzisa umthengisi weempahla okwi-Intanethi.
Nangona kunjalo, kukho amasebe amabini ekufuneka uwaqwalasele xa ujonga iintlobo zezixhobo ezixhaswa yiqonga lokurhweba - CFD kunye ne-Forex.
Ukuba ujonge ukuzibandakanya urhwebo usuku, uninzi lwentengiso yakho luyakwakhiwa njengeCFDs (ikhontrakthi-yomahluko). Ii-CFD zikuvumela ukuba utyale imali kulo naliphi na udidi lweeasethi ngaphandle kokuba ube ngumnini weasethi. Endaweni yoko, ucinga nje ukuba ixabiso lokwenyani le-asethi liza kunyuka okanye lihle kwindawo yentengiso evulekileyo.
Umzekelo, masithi ufuna ukurhweba ngerhasi yendalo, ke uthenga i-CFD kwi- £ 50 ngesivumelwano ngasinye. Ukuba ixabiso legesi yendalo lenyuke laya kuthi ga kwi-70 yemakethi kwindawo yentengiso yehlabathi, i-CFD yakho inokuxabiswa nge- $ 70. Kananjalo, ii-CFD zilanda umkhondo wexabiso lokwenyani leasethi, liyenza igqibelele kwabo banqwenela ukurhweba kwi-Intanethi.
Apha ngezantsi sidwelise ezinye zeeklasi zeasethi ezithandwa kakhulu oya kuthi ukwazi ukuzithenga uthengise ngohlobo lweCFD.
✔️ Izalathisi zeMarike yeStock
✔️ Iintsimbi ezixabisekileyo
Udidi lwesibini lweeasethi oluya kukwazi ukuthenga nokuthengisa kwiqonga lokurhweba kwi-Intanethi yi-forex. I-Forex (ekwabizwa ngokuba yiFX okanye utshintshiselwano lwangaphandle) ngumzi-mveliso osisigidi seetriliyoni obandakanya ukurhweba ngemali enye kwenye. Umxholo ophambili kukuba uya kuzabalazela ukwenza inzuzo ngokuhamba kwamaxabiso kweemali ezimbini. Isixhobo ngasinye sokurhweba kwisithuba se-forex saziwa njenge 'isibini', esineemali ezimbini ezikhuphisanayo.
Umzekelo, enye yezona zibini zokurhweba ngolwelo IGBP / USD. Ukuba uvakalelwa kukuba i-GBP iya kunyuka kwixabiso malunga ne-USD, uya kubeka umyalelo wokuthenga. Oku kungenxa yokuba i-GBP ikwicala lasekhohlo le-currency pair. Ngaphandle koko, ukuba uvakalelwa kukuba i-USD iya kunyuka kwixabiso elichasene ne-GBP, uya kubeka umyalelo wokuthengisa - njengoko i-USD ikwisandla sokunene sesibini.
Forex yorhwebo Iibini zihlulwahlulwa ngokwamacandelo amathathu aphambili- ubukhulu, abantwana, kunye nezinto ezingaqhelekanga.
Njengoko igama libonisa, iibini ezinkulu zemali zineemali ezimbini eziphambili. Oku kuya kubandakanya ukuthanda kwedola yaseMelika (i-USD), iPound Sterling (GBP), iJapan Yen (JPY), kunye ne-Euro (EUR). Njengoko kukho imfuno enkulu yeemali ezinkulu, ukuthengiswa kwemali kuhlala kuphezulu.
Kananjalo, uya kuxhamla ekusasazeni ngokuqinileyo kunye nemirhumo esezantsi. Uyakukwazi ukufumana amanqanaba aphezulu okunyusa kwiibini ezinkulu, njengoko ukungazinzi kuphantsi kakhulu.
Izibini ezincinci ziya kubandakanya imali enye enkulu, kunye nemali enye eyomeleleyo, nangona kunjalo, ingamanzi amancinci. I-NZD / JPY ngumzekelo ophambili wesibini esincinci. Kwicala lasekhohlo lesibini, une dollar yaseNew Zealand, ethathwa njengemali encinci. Kwicala lasekunene, uneYen yaseJapan, eyimali enkulu.
Izibini ezingaqhelekanga ziya kuhlala zinemali enye enkulu, kunye nemali enye kuqoqosho olukhulayo. Umzekelo, ukuba unokurhweba nge-Euro ngokuchasene ne-Lira yaseTurkey, i-EUR / TRY iya kuthathwa njengesiqhelo. Ukuba uthatha isigqibo sokurhweba ngezibini ezingaqhelekanga, ukusasazeka kuya kuba phezulu kakhulu xa kuthelekiswa ne-majors kunye nabantwana.
Kungenxa yokuba kukho imfuno encinci yemali evelayo, oko kuthetha ukuba kuya kufuneka uhlawule ixabiso eliphezulu ukufikelela kwimakethi. Ngaphaya koko, izibini ezingaqhelekanga zinamava aphezulu kakhulu okuguquguquka.
Qaphela: Uninzi lwamatyala, amaqonga orhwebo akwi-Intanethi aya kubonelela ngezo zombini ii-CFD kwaye forex. Kananjalo, kunqabile ukuba kubekho imfuneko yokuvula iiakhawunti zabarhwebi ezahlukeneyo ukufikelela kuzo zombini iindawo zentengiso.
Ungalikhetha njani iqonga lokuthengisa lase-UK?
Ke ngoku ukuba uyazi ukuba zeziphi izixhobo zemali onokufikelela kuzo kwiqonga lokurhweba kwi-Intanethi, ngoku siza kukubonisa ukuba zeziphi izinto ekufuneka ujonge kuzo xa ukhetha umrhwebi omtsha. Oku kuyakuvumela ukuba wenze inkuthalo yakho ngaphambi kokuvula iakhawunti.
Ngaphandle kwamathandabuzo, eyona nto ibalulekileyo ekufuneka uyijongile kukuba ingaba iqonga lokurhweba lilawulwa na. E-UK, zonke ii-CFD kunye nabarhwebi be-forex kufuneka banikwe ilayisensi ngu FCA. Kananjalo, kuya kufuneka ukwazi ukufumana inombolo yobhaliso ye-FCA yomthengisi edweliswe eqongeni.
Ukuba awuyifumani, kuya kufuneka ujonge irejista yeCAA, onokuyenza ukufikelela apha. Ngokubalulekileyo, ukuba iqonga lakho olikhethileyo lokuthengisa alilawulwa yi-FCA, ke ayinasiphulelo somthetho sokwamkela abathengi base-UK.
Ngaba ukhe wacinga ngendlela oceba ngayo ukufaka kunye nokurhoxisa imali kwiqonga lakho olikhethileyo lokurhweba? Uninzi lwabarhwebi kwindawo yase-UK bayakuvumela ukuba udlulise imali kwiakhawunti yakho yebhanki. Ngale nto ithethwayo, kuya kufuneka ulinde iintsuku ezimbalwa ngaphambi kokuba imali ifakwe.
Ke, ukuba ujonge ukufaka imali ngoko nangoko, khetha iqonga lokurhweba elixhasa amakhadi ebhanki/ngetyala, okanye i-wallet enje. PayPal or Skrill.
Ukurhweba kwi-Intanethi Amaqonga akwishishini lokwenza imali, ke kuyakufuneka uhlawule imali ukuze usebenzise iinkonzo ezinikezelwa ngumrhwebi. Imirhumo oyibhatalayo iya kuxhomekeka kuhlobo lwempahla onqwenela ukuyithengisa. Umzekelo, i-forex ihlala itsala ikhomishini eyahlukileyo, ebalwa ngokobungakanani borhwebo lwakho.
Ukuba urhweba ngee-CFD, uninzi lwabarhwebi lubonelela ngale ndlela ngaphandle kwentlawulo. Nangona kunjalo, kuya kufuneka ujonge ubungakanani bokusasazeka. Ezinye ii-CFD-ezinje ngezitokhwe kunye nezabelo, zihlala ziza nokusasazeka okuphezulu, ke qiniseka ukuba uyakujonga oku ngaphambi kokubhalisa.
Kuya kufuneka uphonononge indawo yokuthengisa yomthengisi ngaphambi kokuba ubhalise. Oku kukuvavanya ukuba zeziphi izixhobo zemali oza kuba nakho ukuthengisa. Kwiimeko ezininzi, amaqonga orhwebo akwi-Intanethi aya kubonelela phakathi kwe-50 kunye ne-100 yezibini ze-forex. Oku kuya kugubungela uninzi lweejors kunye nabantwana, kunye nenani lezinto ezingaqhelekanga.
Kwisebe le-CFD, amaqonga orhwebo ahlala ngokusingatha amawaka ezixhobo. Okona kuncinci oku kuya kubandakanya isitokhwe kunye nezabelo, ii-ETFs, ikamva, izinto zorhwebo, ii-indices kunye nee-cryptocurrensets.
Tools Izixhobo zoHlahlelo lobuGcisa
Ukuba ujonge ukubandakanyeka kurhwebo losuku, kubalulekile ukuba usebenzise iqonga elinikezela iimfumba zezalathi. Oku kuyakuvumela ukuba wenze uhlalutyo olunzulu lweendlela zembali yamaxabiso, kunye nendlela ezi zinto ezinokuthi zibe nefuthe ngayo kwixabiso elizayo le-asethi.
Ezinye zezona zimpawu zibalulekileyo zobuchwephesha zibandakanya iStochastic Oscillator, Ukuhambisa umndilili weConvergence Divergence (MACD), iBollinger Bands. kunye nesalathiso samandla esihlobo (RSI).
Kuya kufuneka unamathele kumaqonga orhwebo akwi-intanethi anikezela ngezixhobo zophando eziphezulu. Oku kuyakuvumela ukuba uvavanye imicimbi yeendaba ezisisiseko ngexesha-lokwenyani, kwaye ke, ukumisela ukuba umsitho uza kulichaphazela njani ixabiso le-asethi.
Umzekelo, ukuba iFederal Reserve yazisa ukuba izonyusa inzala, uya kufuna ukwaziswa kwangoko nje ukuba isigqibo siye esidlangalaleni.
Ungasayina njani ngeQonga lokuRhweba eliBalaseleyo?
Ukuba uqinisekile ukuba unezixhobo ezifunekayo ukuze uqalise ikhondo lakho lokurhweba kwi-Intanethi, ngoku siza kukunika inyathelo ngenyathelo ngenyathelo malunga nento ekufuneka uyenzile. Amanyathelo angezantsi ahlala ehlala ehleli nokuba yeyiphi iqonga lokurhweba ohamba nalo.
Inyathelo 1: Khetha iqonga lokuthengisa
Okokuqala nokuphambili, kufuneka ukhethe iqonga lokurhweba elihlangabezana neemfuno zakho. Kuya kufuneka ulandele isikhokelo esidwelise apha ngasentla kwaye emva koko wenze inyameko ethile kumrhwebi. Oku kubandakanya izinto eziphambili ezinje ngemirhumo, imimiselo, iintlawulo kunye nezixhobo zophando.
Ukuba awunalo ixesha lokwenza uphando oluzimeleyo, singacebisa ukuba ujonge amaqonga okurhweba amahlanu acetyiswayo esiwadwelise ngakumbi kwisikhokelo sethu.
Njengoko kunjalo ngalo naliphi na iqonga lotyalo-mali kwi-Intanethi, ngoku kuya kufuneka uvule iakhawunti kunye nomthengisi omkhethileyo. Kuya kufuneka kuqala unikezele ngolwazi lomntu siqu, njengegama lakho elipheleleyo, idilesi yasekhaya, umhla wokuzalwa, kunye nenombolo yeinshurensi yelizwe.
Emva koko, kuya kufuneka unikezele ngolwazi malunga namava akho otyalo-mali lwangaphambili. Oku kuya kubandakanya uhlobo lwezixhobo zemali othengise ngazo ngaphambili, ubude bexesha obukade urhweba ngalo kwi-Intanethi, kunye nobungakanani obuphakathi bezorhwebo lakho.
Inyathelo 3: Qinisekisa isazisi sakho
Ukuze uhlale uthobela i-FCA, amaqonga orhwebo akwi-Intanethi ayakufuna ukuqinisekisa ubungqina bakho. Eyaziwa ngokuba yi-KYC (Yazi uMthengi wakho), inkqubo ifuna nje ukuba ulayishe amaxwebhu axhasayo. Ukuba urhwebo lwemihla ngemihla ujonge ukufaka imali encinci, incwadana yokundwendwela okanye iphepha-mvume lokuqhuba lanele.
Amanye amaqonga orhwebo akwi-Intanethi aya kukucela ukuba ulayishe uxwebhu olubonisa ukuba uhlala kwidilesi yakho echaziweyo. Ukuba iyakwenza oko, kuyakufuneka ulayishe ikopi yamva nje yesitetimenti sebhanki, ingxelo yerhafu, okanye ityala elisebenzisayo.
Inyathelo 4: Fundisa iAkhawunti yakho yoRhwebo
Nje ukuba iqonga lokuthengisa liqinisekisile i-ID yakho, kuyakufuneka ufake imali. Uninzi lwabarhwebi likuvumela ukuba ubeke imali ngedebhithi / kwikhadi letyala okanye kugqithiso lwebhanki, kwaye abanye bade bavumele ii-wallets. Qiniseka nje ukuba ujonga ukuba ngaba indlela oyikhethileyo yokutsala itsala nayiphi na imali, kwaye kuthatha ixesha elingakanani kwiqonga lokurhweba ukuze uboleke imali.
Ngoku ukuba ufumene imali kwiakhawunti yakho yomrhwebi, ukulungele ukuqala ukurhweba. Ukuba awuzange uthengise ngaphambili, unokhetho oluninzi lokufumana ukuba uqale. Unokuthatha isigqibo sokusebenzisa iqonga leakhawunti yomthengisi, eya kukuvumela ukuba uziqhelanise ngaphandle kokubeka emngciphekweni nayiphi na imali.
Ngale nto ithethwayo, iiakhawunti zedemo azikulungiseleli imeko yeemvakalelo zokuphumelela kunye nokuphulukana. Kananjalo, kunokuba kungcono ukurhweba ngemali yokwenyani, nangona kunjalo, uneemali ezincinci kakhulu.
AmaQonga aRhwebo aPhambili e-UK
Ke ngoku, ukuba ukuqonde ngokuqinileyo into ekufuneka uyijongile xa ukhetha iqonga lokurhweba, kunye namanyathelo ekufuneka uwathathe ukuze uqalise, ngoku uxhobile ngezixhobo ezifunekayo ukuqala ukurhweba.
Nangona kunjalo, ukuba awunalo ixesha lokufumana umrhwebi ngokuzimeleyo, sidwelise ezona zintlanu zeqonga lethu lokurhweba lase-UK lingezantsi.
Ukuba usifundile isikhokelo ukusuka ekuqaleni ukuya esiphelweni, kuya kufuneka ngoku ube nezixhobo ezifunekayo zokukhetha iqonga lokurhweba lase-UK elihlangabezana neemfuno zakho. Sichaze ezinye zezona zinto zibalulekileyo ekufuneka ujonge kuzo xa ukhetha umrhwebi omtsha, njengemirhumo, umgaqo kunye neentlawulo.
Kananjalo, uyacetyiswa ukuba wenze ukhuthala olufanelekileyo kwiqonga lokurhweba ngaphambi kokuba ubhalise. Ngale nto ithethwayo, ukuba awunalo ixesha lokwenza iimfumba zophando, sikwadwelise amaqonga amahlanu asebenzayo asebenzayo kwindawo yotyalo-mali yase-UK.
Ekugqibeleni, qiniseka ukuba uyabazi ubungozi bokurhweba kwi-Intanethi, kwaye ungaze utyale imali engaphaya kokufikelela kuyo.
Ndiyifaka njani imali kwiqonga lokuthengisa?
Iindlela ezithile zokuhlawula ziya kwahluka kwiqonga-ukuya-eqongeni. Uninzi lwamaqonga likuvumela ukuba ubeke imali kwiakhawunti yebhanki okanye kwi-debit / kwikhadi letyala, kunye nezinye i-e-wallets zenkxaso.
Ngaba onke amaqonga orhwebo abonelela ngesixhobo?
Uninzi lwamaqonga orhwebo e-UK aya kubonelela ngombane. Nangona kunjalo, i-UK brokers kufuneka ihambelane nemida yokunyanzeliswa ebekwe yi-ESMA. Oku kubeka ikepusi engama-30: 1 kwizibini eziphambili ze-forex, kunye ne-20: 1 kubantwana nakwizinto ezingaqhelekanga.
Yeyiphi eyona dipozithi incinci efunekayo kwiqonga lokurhweba kwi-Intanethi?
Uninzi lwamaqonga orhwebo akwi-Intanethi afuna ukuba ubeke ubuncinci i- $ 100 ukuze uqalise. Abanye baya kucela nangakumbi, ke qiniseka ukujonga oku ngaphambi kokuba ubhalise.
Ngubani olawula amaqonga orhwebo akwi-Intanethi e-UK?
Onke amaqonga orhwebo asebenzayo e-UK aya kufuna ukulawulwa yi-FCA.
Ngaba amaqonga orhwebo ase-UK axhasa ukuthengisa okufutshane?
Ukuba iqonga lokurhweba libamba ii-CFDs (uninzi lwazo), uya kuba nakho ukuthengisa ngokufutshane.
Ngaba ndiza kuba ne-asethi xa ndithenga ii-CFD kwiqonga lokuthengisa lase-UK?
Ii-CFD zikuvumela ukuba uqikelele kwiasethi, okanye kwiqela leeasethi, ngaphandle kokuba nesixhobo. Kananjalo, ucinga nje ngexabiso lempahla yexa elizayo.
Ngaba kufuneka ndisebenzise iqonga lokurhweba ngaphandle kwentlawulo?
Iqonga lokuthengisa ngaphandle kwentlawulo likuvumela ukuba uthenge kwaye uthengise iiasethi ngaphandle kokuhlawula ikhomishini. Nangona kunjalo, kuya kufuneka uthathe ubungakanani bokusasazeka kwi-akhawunti, kuba le yimirhumo oyakuhlawula ngokungangqalanga.